Music Audio & MTV – Myanmar Info Hub
Home Entertainment Music Audio & MTV
in : Entertainment, Music Audio & MTV
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲကြီးကို ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် တွင် ကျရောက်မည့် သူ၏ မွေးနေ့တွင် ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်နေပြီး သီချင်းများအတွက် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များ၏ တောင်းဆိုမှုအရ ရန်ကုန်မြို့အပြင် မ္တလေးမြို့တွင်လည်း လာမည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်တွင်Dream lover bandနှင့် အတူ one lady show ကို ပြုလုပ် သွားမည်ဟု သိရသည်။ ”ပထမတော့ ရန်ကုန်တစ်ပွဲပဲလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားတာ ပါ၊ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တွေက မန္တလေး မှာလည်း လုပ်စေချင်တယ်လေ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ”ဂါ” တေးစီးရီးDVDကိုလည်း တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲ မတိုင်မီမှာ ဖြန့်ချိမှာပါ၊ အခွေအတွက်လည်း ပြင်ဆင် နေသလို တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေရတာမို့ အလုပ်တွေလည်း ရှုပ်နေပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော် …
MEBC Production မှ (2.11.2017) နေ့တွင်တေးသံရှင် ဇော်ဝင်းထွဋ် Emperor Band ၊ R ဇာနည် The Trees Band ၊ ဝေလ Runners Band တို့နှင့်အတူ ပူပေါင်းဖျော်ဖြေမည့် ဆေးပေါင်းခတဲ့ည Rock Concert Night Show ကြီးကို ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည် .. ဝင်ခွင့်လက်မှတ်များအား ဝယ်ယူအားပေးလိုကြသော ချစ်ပရိသတ်များအားလုံး မိမိနှစ်သက်ရာနေရာများတွင် လွယ်ကူချောမောစွာရွေးချယ်နိုင်ဝယ်ယူနိုင်ရန် လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာများအား ကြိုတင်အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်… အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ထပ်မံကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်…. Pre Order Ticket များကိုလည်း ဖုန်းနံပါတ် 09-261566335(MEBC Production) နှင့် 09-451010789(MM TIX) သို့ ဆက်သွယ်၍ မှာယူနိုင်ပါပြီ … လက်မှတ်အမျိုးအစားများ **************** VVIP (Exclusive) – 50000/- VVIP …
ZAYN ရဲ့ Dusk Till Dawn Music MTV ထွက်ရှိ Featuring အနေနဲ့ Sia ကသီဆိုပေးထားပါတယ်.. အဆိုပါ MTV မှာ Zayn ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံ အသစ်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါ။
Billboard Music Hot100 top 10 August 2017
လူငယ်တေးဂီတအဖွဲ့ The Vamps ၏ တတိယမြောက်စီးရီးခွေထွက်ရှိ
ဗြိတိန် pop music လူငယ်တေးဂီတအဖွဲ့ The Vamps ၏ တတိယမြောက်တေးစီးရီး Night & Day (Night Edition) Album အသစ်ထွက်ရှိလာပါပြီ။ pop သီချင်းချိုချိုကြိုက်န်ှစ်သက်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ နှစ်သက်စရာ album တစ်ခုဖြစ်လာအုံးမှာပါ။ Track List Middle Of The Night All Night Hands Same To You Paper Hearts Shades On It’s A Lie Stay My Place Sad Song
Track List 01. Feed The Machine 02. Coin For The Ferryman 03. Song On Fire 04. Must Be Nice 05. After The Rain 06. For The River 07. Home 08. The Betrayal (Act III) 09. Silent Majority 10. Every Time We’re Together
Track List 01. Heart Break 02. You Look Good 03. Somebody Else’s Heart 04. This City 05. Hurt 06. Army 07. Good Time To Be Alive 08. Think About You 09. Big Love In A Small Town 10. The Stars 11. Teenage Heart 12. Home 13. Famous